सपन्याह3ERV-NE - यरूसलेमको - Bible Gateway
3 यरूशलेम तिम्रा मानिसहरू मेरो बिरूद्धमा लडेका छन्। तिम्रा मानिसहरूले अरू मानिसहरूलाई चोट पुर्याएकाछन् अनि तिमी पापले कलंकित छौ।2तिम्रो मानिसहरूले मेरो वचनहरू सुनेनन्। तिनीहरूले मेरो शिक्षाहरू स्वीकार गरेनन्। यरूशलेमले परमप्रभुमा भरोसा गरेन। यरूशलेम उसको परमप्रभुको नजिक आएन।3यरूशलेमका प्रमुखहरू र्गजिरहने सिंहझैं छन्। त्यसका न्यायकर्ताहरू भोका ब्वाँसाहरू जस्ता छन् जो साँझमा आउँछन् अनि भेंडा़हरूलाई आक्रमण गर्छन् अनि बिहान केही पनि रहँदैन।4त्यसका अगमवक्ताहरूले धेरै प्राप्त गर्न सधैँ गुप्त योजना बनाउँछन्। त्यसका पूजाहारीहरूले पवित्र चिजहरू अशुद्ध बनाउँछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको शिक्षि विपरित गर्छन्।5तर परमेश्वर अझै तिनीहरूको शहरमा हुनुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले केही पनि नराम्रो गर्नुहुन्न। उहाँले सधैँ उहाँका मानिसहरूको भलाई गर्नुहुन्छ। प्रत्तेक बिहान परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई असल निर्णय लिन सहायता गर्नुहुन्छ। तर दुष्ट मानिसहरू तिनीहरूले गरेको गल्तीको निम्ति लज्जित हुनुपर्छ भन्ने पनि जान्दैनन्।
6 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मैले जातिहरूलाई ध्वंश गरेको छु। मैले तिनीहरूको रक्षा धरहरा नष्ट गरिदिएको छु। मैले तिनीहरूको बाटोहरू नष्ट गरिदिएकोछु अनि अहिले त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्। तिनीहरूका शहरहरू उजाड छन्, त्यहाँ कोही पनि बस्दैनन्।7मैले तिमीहरूलाई यो यसकारण भनि रहेछु कि तिमीहरूले यसबाट शिक्षा लेऊ। म चाहन्छु तिमीहरू मसँग डराऊ अनि मेरो इज्जत गर। यदि तिमीले यस्तो गर्यौ भने तिमीहरूको घर नष्ट हुनेछैन। यदि तिमीहरूले यसो गर्यो भने मैले बनाएको योजना अनुसार तिमीहरूलाई दण्ड दिइने छैन।” ती अपराधी मानिसहरूले अझै अपराध मात्र गर्न चाहन्छन् जुन तिनीहरूले पहिला देखि नै गर्दै आएका थिए।
8 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यसकारण म उठुन्जेल अनि तिम्रो न्याय गरून्जेल पर्ख। धेरै जातिका मानिसहरू ल्याउँने अनि तिमीलाई दण्ड दिनको निम्ति तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने मेरो निर्णय हो। तिमीहरूको बिरूद्ध मेरो क्रोध देखाउँन म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछु। म कति रिसाएको छु त्यो देखाउँनु र समस्त देश नष्ट गराउँनु म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछु।9त्यस समय म अरू जातिका मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्नेछु ता कि तिनीहरूले स्पस्ट भाषा बोल्न सक्छन्। तिनीहरूले परमप्रभुको नाउँ पुकार्ने छन्। तिनीहरू सबैले एक साथ मेरो आराधना गर्नेछन्। 10 मानिसहरू आफ्नो बलिहरू लिएर मेरो लागि नदीपारिबाट यहाँ इथोपियामा आउँनेछन्।
11 “यरूशलेम, तिम्रा मानिसहरूले मेरो बिरूद्धमा गरेका दुष्ट कुराहरूको लागि अब लाज मान्नु पर्नेछैन। किनकि म ती सबै नराम्रा काम गर्नेहरूलाई यरूशलेमबाट बाहिर ल्यउँनेछु। म ती सबै घमण्डीहरूलाई टाढा पठाउँनेछु। त्यहाँ कोही पनि घमण्डी मानिसहरू मेरो पवित्र पहाडमा हुनेछैनन्। 12 म शान्त अनि नम्र मानिसहरूलाई यरूशलेममा बस्न दिनेछु, अनि तिनीहरूले परमप्रभुको नाउँमा भरोसा राख्नेछन्। 13 इस्राएलमा बाँचेकाहरूले नराम्रो काम गर्नेछैनन्, तिनीहरूले झूटो बोल्ने छैनन्। तिनीहरूलो झूटो बोलेर मानिसहरूलाई ठग्ने छैनन्। तिनीहरू त्यो भेंडा़ जस्तै हुनेछन् जुन खाए पछि शान्तसँग सुतिबस्छ, कसैले पनि तिनीहरूलाई सताउँने छैन।”
एउटा खुशीको गीत
14 हे यरूशलेम! खुशी होऊ अनि गीत गाऊ।
हे इस्राएल! आनन्दले कराऊ,
यरूशलेम खुशी होऊ अनि आनन्द मनाऊ।
15 किनभने परमप्रभुले तिम्रो दण्ड रोकिदिनु भयो।
उहाँले तिम्रो शत्रुहरूको दृढ किल्लाहरू नष्ट गरिदिनु भयो।
इस्राएलका राजा परमप्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
तिमीले कुनै नराम्रो घट्नाको बारेमा,
चिन्ता गर्नु पर्ने आवश्यक्ता छैन।
16 त्यस बेला यरूशलेमलाई भनिनेछ,
“नडराऊ, बलवान होऊ।
17 परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
उहाँ एकजना शक्तिशाली सैनिक जस्तै हुनुहुन्छ।
उहाँले तिम्रो रक्षा गर्नु हुनेछ।
उहाँले तिमीलाई कति प्रेम गर्नु हुन्छ सो उहाँले देखाउनु हुन्छ।
तिमीसित उहाँ कति प्रसन्न हुनुहुन्छ।
उहाँ हाँस्नु हुनेछ अनि तिम्रो बिषयमा अतिनै प्रसन्न रहनुहुनेछ।
18 चाढको दिन मानिसहरू आनन्दित भएझैं खुशी हुनुहुनेछ।”
परमप्रभुले भन्नुभयो, “म तिम्रो लाज निकाली दिनेछु।
म तिमीहरूलाई घात गर्न देखि ती मानिसहरूलाई रोकिने बनाउँछु।
19 त्यस समय, म ती मानिसहरूलाई दण्ड दिनेछु,
जसले तिमीलाई चोट पुर्याए।
मानिसहरू जो घायल छन् म तिनीहरूलाई बचाउँछु।
म छरपष्ट भएका मेरा मानिसहरूलाई जम्मागर्नेछु
अनि म तिनीहरूलाई प्रशिद्ध बनाउँनेछु
जता-ततैका मानिसहरूले तिनीहरूको प्रशंसा गर्नेछन्।
20 त्यस समय म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउँनेछु,
म तिमीहरू सबैलाई एकै साथ फर्काएर ल्याउँनेछु,
म तिमीहरूलाई प्रशिद्ध बनाउँनेछु।
प्रत्तेक ठाउँका मानिसहरूले तिम्रो प्रशंसा गर्नेछन्।
यो त्यस बेला हुनेछ जब म तिम्रो आँखाको अगाडी,
ती कैदीहरूलाई फर्काएर ल्याउँनेछु।”